Amabhodi kakhonkolo → Ukupaka • Uthango • Ultratense Concrete®
Izakhiwo ezincane yenza okuncane izinto zokwakha hlangene Isikhala seDolobha noma etholakala esakhiweni sangasese futhi enikeza uhlamvu oluthile endaweni enikeziwe. Okuthunyelwe ngokhonkolo, zesimanje amabhentshi, sheds, amatafula, izimbali ngezimbali, imigqomo kadoti, ibhayisekili limile, izembozo zezihlahla nezindawo zokudlala zenza isikhala silingane futhi siwenze uhlukile, muhle futhi usebenze.
Izinto ezinjalo futhi izikhala zokhonkolo ezibekwe endaweni yasemadolobheni futhi Ukuvimbela ukuhamba kwesiyingi endaweni enikezwe. Bungumhlobiso futhi ngasikhathi sinye benza umsebenzi obalulekile, ukuvimbela ukupaka ezindaweni ezingafanele.
Izinhlobonhlobo zemiklamo ivumela ukukhethwa kokuthunyelwe kokhonkolo okufanelana kahle nendawo ezungeze amadolobha.
Okuthunyelwe okusetshenziswa kakhulu kwenziwa ngokhuni, ngensimbi nangokhonkolo.
Okuthunyelwe kocingo lukakhonkolo, ngokungafani nokuthunyelwe ngokhuni, kwenziwa ngezinto ezihlala isikhathi eside ezingaboli futhi ezingamelana nokuhlasela kwezinambuzane.
Okuthunyelwe kukakhonkolo kuqinile futhi kuqinile.
Zivame ukusetshenziswa emapulazini, ezingadini zasekhaya nasemgcekeni, nasezindaweni zomphakathi zasemadolobheni, ngokwesibonelo amabhodi okupaka noma uthango.
Okuthunyelwe kocingo lukakhonkolo nakho kuyingxenye efenisha yemigwaqo, hhayi kuphela ezindaweni zomphakathi, kodwa nasezindaweni ezizimele.
Kuthiwa uthango lwenza umsebenzi walo kahle lapho lwenza kahle izingcingo kocingolokho kuzenza zikhuphuke. Izinto abazokwenziwa kuzo zinquma amandla abo nokusebenza kwazo. Okuthunyelwe kocingo kungenziwa ngokhuni, ngensimbi, ngokhonkolo noma ngensimbi eyenziwe ngodonga.
Ziyahluka ngentengo, ukuqina, ukufakwa kalula kanye ne-aesthetics.
Noma imigoqo Ikhonkolo zihlala isikhathi eside kakhulu, ukungathandeki kwazo kungukungasho lutho nokuqhekeka njalo. Uma amanzi eqoqana kuqhekeka, kungaqhenqa ebusika futhi kubangele ukuba izingxenye zeposi zihlukane.
Abanye abantu bakhetha ukusebenzisa okuthunyelwe okwenziwe kwezinye izinto, kufaka phakathi: insimbi egqinsiweyo, insimbi noma izinkuni.
Okuthunyelwe ngokhonkolo zivame ukubiza kakhulu kunabalingani bazo abasebenza ngokhuni, kepha azidingi ukugcinwa kanye nokubekwa minyaka yonke.
Okubi wukuthi ku-Mediocre iposi likakhonkolo inesisindo esifinyelela kuma-40 kg, okunyusa izindleko zokuhlangana, yize ngakolunye uhlangothi, okuthunyelwe kokhonkolo kunikela ukusekelwa okuqinile impela.
Amabhodi kakhonkolo angathengwa ezitolo zokuthuthukisa ikhaya noma ngokuqondile kumenzi, okuvame ukunikela ngemikhiqizo ngokuqina okukhulu nangokwakhiwa okuvamile.
Okuthunyelwe ngokhonkolo Idizayini Yefomu Ledolobha
Ama-bollards kakhonkolo weCity Form Design abonakala ngomklamo wanamuhla, futhi ikhwalithi ephezulu yale mikhiqizo iqinisekiswa ngokuhlolwa okuvamile kwezinto zokusebenza nezinqubo zobuchwepheshe.
Inkampani yethu isebenza kahle kakhulu studio yezokwakha nabaqambi, okuqinisekisa isitayela esihle kakhulu nokusebenza kwezinto ezincane zokwakha ezikhiqizwe yiyo.
ICity Design iyinhlangano emele izinkampani zase-Italy iMetalco neBellitalia ePoland.
I-Metalco inikela ngemikhakha emincane engadini emincane neyokwakhiwa kwedolobha, eyenziwe ngensimbi nangokhuni.
Lokhu okunikezwayo kufaka phakathi indawo yasemadolobheni, amapaki, imigwaqo, izingadi neziteshi.
I-Metalco ikhiqiza amabhentshi, obhasikidi basemgwaqweni, okuthunyelwe, amabhodi olwazi, izembozo zezihlahla, izimbiza zezimbali, izitebhisi zamabhayisekili kanye nezinhlobo ezahlukene zefenisha yasemgwaqweni, isb.
I-Bellitalia ingenye yezinkampani ezihola phambili zokukhiqiza ukhonkolo, imabula kanye netshe yemveloezisetshenziselwa ukwakha izinto zefenisha yasemgwaqweni.
Le nkampani yasungulwa ngeminyaka yo-60 e-Italy futhi isisahlukaniswa ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukuqamba okusha kanye nokwenziwa kwesimanje.
I-BELLITALIA Srl ikhiqiza izinto zokwakhiwa kwamadolobha amancane. Kunamabhentshi ekhonkolo afakiwe, amabhodi wolwazi, amabhodwe kakhonkolo kanye namatshe, imithombo, okuthunyelwe okukhawulelana nokuhamba komgwaqo ezindaweni zokudlala kanye nezinkundla zokudlala, kanye nokhonkolo, itshe noma amatshe wokulinganisa itshe, okwaziwayo emhlabeni jikelele.
I-Bellitalia ikhiqiza futhi ithengise amakhulu ezinto ezisebenzayo nenhle, ezifanele ngokuphelele kunoma iyiphi indawo yasemadolobheni.
Ukucebisa ukuqoqwa, kwengezwa izinto ezintsha kumaphrojekthi avelayo: insimbi engagqwali, i-iron yokhuni nokhuni ngendlela yokuthi ifane nekhonkolo futhi yakhe isitayela esisha ngokuphelele.
Emkhiqizweni wayo iBELLITALIA® nayo isebenzisa izakhi zamatshe ayigugu nokuhlanganiswa kwemabula okunothile ocebile nokwakheka kwesimilo.
IBellitalia namuhla isingumholi ekukhiqizeni nasekuthengiseni ifenisha yasemgwaqweni. Isebenzisa izinto ezifana nezinhlobo ezahlukene zikakhonkolo (i-HPC, i-UHPC), amatshe emabula ahlaziywe wemvelo, i-granite aggregate, ukhonkolo omenyezelayo, ukhuni nensimbi.
Izinto zokwenziwa kukakhonkolo ezisetshenziswa yi-BELLITALIA® zivela kumaDolomites azungeze Inkampani. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa kaphethiloli okuphansi nemikhiqizo ephansi ye-CO2 yokuhamba kwabo.
Izinto ezisetshenziswa ezinkombeni zase-Italy ziyavuselelwa futhi zisetshenziselwe ukukhiqiza amatshe ayigugu.
Ukhonkolo okhiqizwe ngale ndlela uyinto eguquguqukayo, eqinile futhi enokuphindeka, ngakho-ke inani lokusebenzisa kabusha alinamkhawulo.
Ngo-2015, iBELLITALIA® yathuthukisa indlela entsha I-Ultratense Concrete®.
Kusetshenziswa okusha okukuvumela ukuthi udale izinto ezintsha nezithakazelisayo ezisetshenziswe endaweni yomphakathi yasemadolobheni.
I-Ultratense Concrete® wuphawu lokuthengisa olubhalisiwe lweBellitalia kuphela. Yakhiwa ngokubambisana nososayensi abavela e-Faculty of Matter, Environmental and Urban Engineering e-University of Marche (SIMAU) naseziteshini zokudweba ezaziwa umhlaba jikelele.
Izinto ezintsha zikakhonkolo ezenziwe ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bamuva be-Ultratense Concrete® zingu-plastic ngokweqile futhi ngenxa yezakhiwo zayo zingaphinde zifakwe kwisikhunta.
I-UTC® ingumbhalo ophethe izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini, enika amandla ukwenziwa kwemikhiqizo enezendlalelo ezincanyana kakhulu nesikhala esilinganayo sobukhulu abathathu.
5 / 5 ( 28 amavoti )
okuthunyelwe kokhonkolookuyisisekelo kokhonkoloizikhala zocingo lukakhonkoloisikhunta sokuthunyelwe kokhonkoloezicijile, okuthunyelwe kokhonkoloi-patentokuthunyelwe kokhonkolookuthunyelwe kokhonkolo kwe-castoramaintengo yamabha kakhonkolouhlu lwamanani entengo ekhonkolookukhonkolo kocingookukhonkolo ukhonkolo lokubiyelwa yiphaneliokukhonkolo ukhonkolo wezingadiokukhonkolo ukhonkolo we-meshizikhala zokhonkolo zokufaka inethi yehlathiizikhala zocingo lukakhonkolozokuhlobisa ukhonkoloukhonkolo wokupaka ukhonkolookukhonkolo ukhonkolo ngaphansi kwethalaokukhonkolo ukhonkolo ngaphansi kwentengo yethalaubukhulu bokukhonkolo izikhalaizingcingo kocingoizikhala zocingo lukakhonkolookuthunyelwe kokhonkolo kokhonkoloamabhodi okupakaukhonkolo wokupaka ukhonkoloIkhonkrithi ye-Ultratense